Sigaarka oo la xaqiijiyey in qayb ka mid ah laga sameeyo dhiiga Doofaarka (Warbixin) – SBC
Sigaarka oo la xaqiijiyey in qayb ka mid ah laga sameeyo dhiiga Doofaarka (Warbixin)
Posted by Webmaster on Maarso 1, 2012 Comments
Dad badan oo muslim iyo gaalo isagu jira ayey balwada sigaarku u tahay wax ay qabitimeen oo ay ka dhigteen caado, tiiyoo ay ku sii lamaansan tahay xaraarad joogto oo lagu sheegay hadii aadan daqiiqo dhuuqin ama aadan buf ka siin xabad sigaar ah.
Fiicnaan laheydaa in dadkaasi joojiyaan caafimaad iyo diin ahaan dhaqanka sigaar dhuuqista oo ay ku badalaan wax naf iyo maal uga roon in xabad sigaar ah dabada lagu dhegan yahay oo qiiqa uun la afuufo, sankana qaar laga siidaayo, qaar kalena sababada loo dhaadhiciyo.
Xaraarad & xaraabeysi tu ay tahayba, haatan waa la isku soo dhigtey, in badan ayey dadka sigaarka dhuuqa dhego ka fureysteen hadalada culimada diinta iyo kuwa caafimaadka oo maaro iyo taag uag waayey in ay ka reebaan hab dhaqankaasi fasahaadka xambaarsan ee ay rag iyo dumar badan labada farood dhexdooda uga saari waayeen sigaarka.
Hadaba kooxo quburo dhanka caafimaadka ah oo ka tirsan Jaamacada University of Sydney ee dalka Australia ayaa daaha ka qaaday dareen culus oo ay u direen dadka sigaarka dhuuqa iyagoo si cad ugu sheegay in dhiiga doofaarka oo xaaran ka ah ummada Islaamka in laga sameeyo qaybta dambe ee sigaarka ama filter-ka waxa loo yaqaan ee sahasha in sigaar dhuuquhu uu jiido naqaska tubaakada sigaarka laga sameeyo.
Professor Simon Chapman oo ka mid ah the University of Sydney ee magaalada Sydney oo soo xiganayey daraasad ay sameeyeen koox qubaro ah oo u dhalatey dalka Holand ayaa sheegay in 185 warshadood oo ah kuwa sigaarka sameeya ay u adeegsadaan farsamada haashka ama filter-ka sigaarka dhiiga doofarka.
Ujeedada dhiiga doofarka loogu adeegsadey qaybta dambe ee sigaarka ee loo yaqaan Haashka ayaa ayaa lagu sheegay in shirkaduhu uga dan leeyihiin in halista kiimikada sigaarka looga yareeyo inay u gudubto sababada, laakiin sigaarka oo awalba diin ahaan loo dhaliilsanaa maadama uu caafimaadka iyo maalka u daran yahay ayaa haatan waxaa lagu sheegay in uu xiriir la leeyahay dhiiga doofaarka.
Chapman oo ay soo xigatey wakaalada wararka ee Australia laga leeyahay ee AAP news agency ayaa yiri “Waxaan filayaa inay jiri doonaan qayb ka mid ah bulshada gaar ahaan kuwa diinta leh inay u arki doonaan mid gef ah in sigaarka lagu daro dheecaanka doofaarka”.
Professor Simon Chapman wuxuu sheegay in dadyowga Islaamka & Yuhuuda ay arinkaasi si weyn uga horimaan doonaan maadama ay yihiin kuwa diin ahaan ka soo horjeeda cunista doofaarka.
Warbixintan oo English ah oo lagu daabacay website-ka news medical halkan ka daalaco
Maarso 3, 2012 at 9:51 am
yaab waan soo dhaweynayaa intaa in ka bada in lagu sheego